Ambongadiny plastika Super Intalox Saddle Ring Tower mpanamboatra fonosana sy mpamatsy | Zhongtai
Ny endriky ny Intalox Saddle Ring dia fitambaran'ny kavina sy ny lasely, izay mahazo tombony ho an'ny roa tonta. Ity firafitra ity dia manampy amin'ny fizarana ranoka sy mampitombo ny habetsahan'ny lavaka gazy. Ny Intalox Saddle Ring dia manana fanoherana kely kokoa, flux lehibe kokoa ary fahombiazana avo kokoa noho ny Pall Ring. Izy io dia iray amin'ireo fonosana be mpampiasa indrindra amin'ny fahamafisana. Izy io dia manana tsindry ambany, fihenam-bidy lehibe ary fahombiazan'ny famindrana faobe ary mora volavolaina.
Famaritana ara-teknika ny lasely plastika Super Intalox
Lasely super intalox plastika
PP / RPP / PVC / CPVC / PVDF, sns
25 × 12,5 × 1.2
Toetoetra ara-batana sy simika an'ny lasely Super Intalox plastika
Teo aloha: Kitapo plastika Intalox Saddle Ring Packing
Manaraka: 25 38 50 76 mm fonosana tilikambo plastika